Smart Mirrror- A ọhụụ ndụ
Echela na enyo anwansi na-adị naanị n'akụkọ ifo. Enweelarị enyo enyo mgbe ochie n'eziokwu. Ọ bụ enyo nwere ọgụgụ isi. Igwe enyo anya bụ ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ ya ma na-agwa ihe dịka ihu igwe, oge na ụbọchị. Intelli ...
Etu ị ga - esi họrọ Smartboard dị ebube maka Nzukọ na ọgbakọ
Site na ahia ndi mmadu nke 5G, teknụzụ dijitalụ na-ebute usoro ohuru ohuru nke AI. Dika otu n’ime “oyuyo ndi mmadu” nke kachasi eji eme ihe, mbadamba ogbako ejiri nke nta nke nta ghota otutu mmadu n’ime ihe n’ile anya site na njirimara ha di elu su ...
Olee otú Iji Jiri Digital signage
Wzọ 3 Gosiri Gị Otu E Si Eji Ihe Ntinye Dijitalụ Chee echiche na oge ikpeazụ ị zutere ụfọdụ ụdị akara ngosi dijitalụ-nsogbu bụ, ọ nwere ike gosipụta ihuenyo dị nro, ọkụ na-enwu gbaa-ọbụnakwa ọ nwere ike nwee ikike mmetụ ihu nke nyere gị ohere ịmekọrịta ọdịnaya gosipụtara na ihuenyo ...
Ihe mere eji etinye kiosks na-aghọ ihe agha nzuzo maka ụlọ oriri na ọ Successụfulụ na-aga nke ọma
N'ime ụlọ ọrụ nke nwere oke oke, asọmpi, na ọnụego ọdịda, olee onye nwe ụlọ nri anaghị achọ ngwa agha nzuzo nke nwere ike inye aka ịkwado ihe atọ a? Mba, ọ bụghị igwe anwansi, mana ọ dị nso. Tinye kiosk nke ị na-enye iwu - klọb nzuzo nke onye na-ere ihe nke oge a. Ọ bụrụ na ị ...
Uru na ọghọm nke kiosk ihuenyo mmetụ infrared
Ntinye ọnọdụ mmetụ na uru na ọghọm ya maka kiosk ihuenyo mmetụ ntanetị, kiosk mmetụ ihuenyo mmetụ na-ebuputa ikuku emrared na igbochi ụkpụrụ. Ihuenyo mmetụ nwere usoro dị oke nkenke, mgbochi nnyonye infrared na-ebufe tubes na otu set nke infrared receivi ...
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Interactive Touch Screen Kiosk, Standalone Digital Akara, Digital Signage Standee, Mgbasa Ozi Digital, Ngosipụta nke Digital, Wall Mounted Digital Signage, Ngwaahịa niile